Izindlela Ezivunyiwe Zosaziwayo Zokugqoka Ama-Hems Asymmetric - Isitayela Seceleb
Izindlela Ezivunyiwe Zosaziwayo Zokugqoka Ama-Hems Asymmetric
Izinketho azipheli lapho kukhulunywa ngokuthola ingubo. Kusuka kuma-silhouettes ahlukahlukene kuya kuzindwangu, imibala, nemidwebo ongakhetha kuyo, ukugqoka kuqinisekile ukuthi ikhabethe lezingubo libalulekile. Ngenqwaba yezinketho ezitholakalayo, ukwenza ukukhetha kungaba ngumsebenzi onzima. Noma kunjalo, kukhona okukodwa okungalokothi kwehluleke ukudonsa ukunaka njalo.
Ama-asymmetric hems ayisibonelo esihle sezingubo ezikubeka igxathu elilodwa phambili kwimfashini. Umphetho ophansi kakhulu uvame ukuba mude ngemuva, futhi mfushane ngaphambili. I-asymmetry ekhangayo ekhangayo yalowo hem iyenza ibe mnandi futhi ithakazelise. Thatha umgwaqo ongajwayelekile esikhathini esizayo lapho unquma ukwenza isitatimende semfashini ngokugqoka ingubo enomphetho ophakeme kakhulu. I-silhouette ingeza ubude emzimbeni wakho, okwenze ubukeke ngokushesha.
Kungakhathaliseki ukuthi ugqoke ingubo evamile noma ingubo yebhola, lesi silhouette esigqamile siyi-hit.
Kuyinto yokukhetha okuphelele kumuntu onganqeni ukubonisa imilenze yakhe. Kungcono ukubhangqa lo mphhetho othile nezithende eziphakeme noma zepulatifomu ukugwema ukushanela phansi. Kule sizini, thatha ukholo bese uya kwengubo esezingeni eliphansi. Osaziwayo emhlabeni wonke benza indlela yabo ebheke kulo mkhuba obhedayo. Izambatho ezincanyana kuya kwezingama-midi, noma yini ibukeka iyimfashini ngalokhu umphetho.
Skrolela phansi ukuze ubheke ama-divas e-Bollywood angakwazi ukuzibamba ekuzameni lezi zingubo.
UKriti Sanon uthanda ukuhamba ngokuvutha kancane ngezikhathi ezithile. Usinikeza inspo enkulu yokuthembela kulo mhlangano we-fuchsia yiDolly Studio.
Okuphuzi akukaze kubukeke kukuhle kangako! Ngabe kukhona okuthile uSonam Kapoor Ahuja angakwazi ukukukhipha? Ngezinwele ezibushelelezi eziboshwe ngemuva namacici amancane, lokhu kubukeka kwakhe kungumsebenzi wobuciko kukodwa.
UMalaika Arora uyindlovukazi yemfashini. Umlingisikazi ubukeka emangalisa ngokuphelele kule nombolo ebomvu nguH & M x Giambattista Valli.
U-Alaya F yingane entsha ebhulokini okufanele iqashelwe kwi-Bollywood. Umqondo wakhe odonsa amehlo wokugqoka kufanele uwunake.
UShraddha Kapoor uyazi ukuthi angabethela kanjani lo mkhuba ngendlela elula.
Konke esifuna ukukwenza ukubekisa lokhu kubukeka ASAP! #Engeza ekalishini
UKatrina Kaif ubukeka njengombono ophelele kulokhu kuhlanganiswa yi-Ashi Studio. Le ngubo imhlanganisa ngokuphelele isitayela sakhe sesikhathi sonke, isitayela esilungele ukhaphethi #RedCarpetQueen
Le ngane yezinkanyezi ihlala ihlose ukugcina indlela eya phambili kwezemfashini. U-Ananya Panday uneqoqo lezimvunulo elihlaba umxhwele, kepha leli kufanele libe elimangalisa kakhulu kunabo bonke.
Ngabe uNora Fatehi akabukeka sengathi usanda kuphuma enganekwaneni? Thatha umuzwa kumlingisi wokuthi ungayifaka kanjani i-DRAMA ekubukekeni kwakho!
Faka okuncane kwe-boho twist ekubukekeni okulungele i-brunch njengoba kwenza uVaani Kapoor. Umqondo womlingisi womlingisi uzizwa njengomoya womoya omusha. Ithiphu yesitayela: Gcwalisa ukhalo ngokulufaka ngebhande
Funda futhi: I-Orenji Ubumnyama Omusha Nabu Ubufakazi!
ikhambi lemvelo lokulahleka kwezinwele
Ukwelashwa kokutheleleka kwesikhumba fungal amakhambi asekhaya
imiphumela emibi ye-baking soda esikhunjeni
amakhambi asekhaya wezinwele awela ekulawuleni nasekuvuseleleni kabusha
amathiphu wobuhle bokulunga nokukhanya kwesikhumba